Governemanta Ntsay Christian : Tsy mahafehy ny vidim-bary -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta Ntsay Christian : Tsy mahafehy ny vidim-bary
12/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tao anatin’ny iray volana izay no nampakatra io vidim-bary io, hoy ireo mpamongady eny Anosibe. Izany hoe, iray volana taty aoriana nandraisan’ireo governemanta ny marimaritra iraisana ny fahefana, izay tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Raha tsiahivina, isan’ireo nanenjika sy be fanakianana indrindra, manoloana ny vidim-bary ireo depiote ho an’ny fanovana tamin’izy ireo mbola teny amin’ny 13 Mai. Amin’izao tonga eo amin’ny fahefana ireto mpanao mazia amin’ny fanamorana ny fiainam-bahoaka. Nidina ve ny vidim-bary? Afa-pahasahiranana ve ny vahoaka malagasy? Ny mifanohitra ary no niseho satria vao mainka nampidangana ny vidim-bary fa tsy nampidina izany akory ny fahatongavan’izy ireo eo amin’ny fahefana. Nefa olon’ny Mapar izao indrindra no mitazona ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana. Hita izao fa tsy manana vahaolana amin’ny famerana ny vidim-bary ny governemantan’ny marimaritra iraisana. Nefa tamin’ny fitondran’ny governemanta Solonandrasana Mahafaly Olivier dia voatazona ny vidim-bary tamin’ny fanafarana vary. Tsikaritra tamin’izay fotoana izay fa na dia volana desambra, izay fotoana maitso ahitra dia vita no nitazona ny vidim-bary. Tamin’ny fitondrana governemanta Mahafaly ihany koa no nisy minisitry nahavita nanenjika ireo mpampakatra vidim-bary izany ary nahavita nanara-maso teny ifotony mihitsy. Marihina fa 1 500 Ariary, 1 400 Ariary teo ny vidim-bary teny an-tsena ny volana jona, tamin’ny niala teo amin’ny fitantanana ny governemanta notarihin’ny praiminisitra teo aloha io.
Velon-taraina amin’ny fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena avokoa ny ankamaroan’ny mpanjifa amin’izao fotoana izao. Tao anatin’ny iray volana izay, dia nahitana fiakarana 50 hatramin’ny 100 Ariary isaka ny kapoaka ny vidim-bary eny amin’ireo mpaninjara, ka ny vary gasy mena sy ny makalioka ary ny tsipala no tena voakasika. Tafakatra 550 Ariary ny makalioka raha 500 Ariary izany teo aloha, sahala amin’izany ihany koa ny vary manalalondo izay 550 Ariary teo aloha fa tafakatra 650 Ariary ankehitriny. Ho an’ny mpamongady eny Anosibe dia lasa 1740 Ariary ny kilao ny vary makalioka, raha 1 680 teo aloha ary 87 000 Ariary ny iray gony. Vary gasy mena indray 1 800 Ariary ny kilao ary 85 000 Ariary ny gony ary toraka izay ihany koa ny iray gony amin’ny vary semence. Nilaza ny mpamongady eny Anosibe fa hatrany am-potony mihitsy no mampakatra ny vidim-bary fa tsy miankina amin’izy ireo. Nambarany ihany koa fa miakatra hatrany ny vidim-bary rehefa fotoana tahaka izao satria vitsy ny vokatra miakatra, ary efa mampirina entana daholo ireo tantsaha. Fa na izany, tsy niakatra be ny vidim-bary raha noharina tamin’ny herintaona hoy izy ireo. Miandry ny fiakaran’ny vary aloha any amin’ny faramparan’ny taona indray vao mety hidina ity vidim-bary ity raha ny tombana.